ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson သည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည် - တီဗီ
ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson: အမေရိကန်ရာဇ ၀ တ်မှုဇာတ်လမ်းသည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်
People V O J Simpson
PASADENA, CA - ဇန်နဝါရီ ၁၆ - (LR Front Row) အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ / စာရေးဆရာဖြစ်သူ Scott အလက်ဇန္ဒား၊ အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ / စာရေးဆရာလာရီကာရာရှူးစကီး၊ အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဘရတ် Simpson၊ အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ၊ ဒါရိုက်တာရိုင်ယန်မာဖီ၊ M.Hemingway နှင့်အတိုင်ပင်ခံ Jeffrey Toobin၊ (LR Back Row) သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သော Malcolm-Jamal Warner၊ Sterling K. Brown၊ Sarah Paulson၊ John Travolta၊ ကျူးဘားဂူဂျူနီယာ၊ Courtney B. Vance နှင့် David Schwinner တို့သည် 'The People v' အတွင်းစင်မြင့်ပေါ်၌စကားပြောကြသည်။ OJ Simpson: ၂၀၁၆ ဆောင်းရာသီ TCA ခရီးစဉ်၏ FX အပိုင်း၌အမေရိကန်ရာဇ ၀ တ်မှုရာဇ ၀ တ်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကို ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်၊ California ရှိ Pasadena တွင် Langham Huntington ဟိုတယ်၌ဆွေးနွေးခြင်း။ (ဖရက်ဒရစ်အမ်ဘရောင်း / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson သည် Netflix တွင်ရှိနေသည် Groundhog Day သည် Bill Murray နှင့် Netflix တွင်ရှိပါသလား။
ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson: ကျူးဘားဂူဂျူနီယာနဲ့အမေရိကန်ရာဇ ၀ တ်မှုဇာတ်ကားတွေပါဝင်တဲ့ Sarah Paulson ဟာ Netflix မှာအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။
Netflix မှာအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အသစ်မှာကျွန်ုပ်တို့မှာအသစ်ရှိသည်။ ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson: အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင် ယခု Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်နေပြီး streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအဆင့်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်သည် ၀ န်ကြီးချုပ်၏တစ်နှစ်တာနှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်သည် ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson FX အပေါ်။ ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင်ယခုစီးရီးကိုစတင်မယ်ဆိုလျှင်ကျန်လူအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုမရောက်နိုင်ပါ။
ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson အပေါ်အခြေခံပြီး 10- ဇာတ်လမ်းတွဲ miniseries ဖြစ်ပါတယ် သူ၏အသက်တာ၏အပြေး: ။ ပြည်သူ့ v O.J. Simpson, အဆိုပါ O.J. တစ်ခုအကောင့် ဂျက်ဖရီ Toobin ကရေးသား Simpson လူသတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေး။ Ryan Murphy ကScott အလက်ဇန်းဒါးနှင့်Larry Karaszewski သည် FX အတွက် miniseries ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Cuba Gooding Jr. Sarah Paulson၊ Courtney B. Vance၊ John Travolta၊ David Schwimmer၊ Sterling K. Brown၊ Kenneth Choi၊ Christian Clemenson၊ Nathan Lane နှင့် Bruce Greenwood တို့ပါဝင်သည်။
netflix အပေါ်အရှုပ်တော်ပုံ၏ရာသီ 6
ဒါဟာစီးရီးယခုနှစ်အကောင်းဆုံးပြပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ရှင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Sarah Paulson, Sterling K. Brown နှင့် Courtney B. Vance တို့သည်လည်းအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်များဖြစ်သည်။
ငါဒီမှာလူနည်းစုအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်စီးရီးထိပ်ကျော်နည်းနည်းနှင့်အချိန်များတွင်လည်းသိသိသာသာ။ ငါအရင်ကပြောခဲ့ပေမယ့်ဒါဝိဒ်သည် Schwimmer ကဖျော်ရည်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေထက်အခြားစီးရီးနှင့်အတူငါ့တစ်ခုတည်းသောပြissueနာပါပဲ။ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းအကြောင်းကိုမရေမတွက်နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ငါတို့တွေအတွက်ဒီဇာတ်လမ်းကအရမ်းရူးသွပ်တယ်။ ဒါဟာဖွင့်ကစားခံရဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ သူကပြောသည် ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson ကြီးစွာသောစီးရီးဖြစ်ပြီး, ဝေဖန်သူများကသဘောတူသည်။
ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုငါးခုနှင့် Primetime Emmys ၂၂ ခုအပါအ ၀ င်ရွှေတံဆိပ်ဆုများအတွက်တစ်တန်ဆုအတွက်လျာထားခံခဲ့ရသည်။ ပြည်သူ့ v ။ O.J. Simpson သည်အကောင်းဆုံးလီမိတက်စီးရီးအတွက်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုနှစ်ဆုနှင့် Emmys ကိုးယောက်နှင့်အတူ Limited Series (Sarah Paulson) တွင်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲ ၅၀ တွင်လည်းပါဝင်သည်။ သင်စီးရီးပြီးစီးပြီးနောက်, နှစ် ဦး စလုံးအဆင့်အတွက်အခြားအကြီးအပြပွဲအချို့ကိုကြည့်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
ဗဟို၏ရာသီ 13 ရှိလိမ့်မည်
ရာဇပလ္လင်ရာဇဝင် dvd ၏ဂိမ်း
netflix အပေါ်အချိန်ရာသီ6အပေါ်သို့တစ်ချိန်ကအခါ